सियो बनिसक्यो ? - परिहास - नेपाल
ठीकै छ मन्त्रीज्यू † नेताको कुरा हम्मेसि पत्याउने चलन छैन । कम्तीमा सियो कहाँ बन्यो ? मातृका यादव एन्ड कम्पनीमा कहिलेदेखि बन्न थालेको हो सियो ? यो खबर अहिलेसम्म किन लुकाएर राख्ने दुस्साहस गर्नुभो ? त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्‍यो संसद्लाई । तब मात्र थेगो बदलिएला– सियो अहिले नेपालमै बन्छ ।